सम्पादकीय - बाढीको कहर बाँकी नै
आँकलनको दायराले केही भ्याउँदैन, हेर्दा हेर्दै बाढी, डुवान र पहिरो
श्रावण ६, २०७६ मध्य नेपाल संवाददाता
यो बर्षको मनसुन सुरु भएसँगै चारपाँच दिनदेखिको लगातार बर्षाका कारण पर्सा लगायत तराईका अधिकांश भूभाग बाढी र डुवानमा छन् । भिरालो जग्गा अथवा पहाडी भूभागमा बाढी र पहिरो छ । भन्न त सजिलो छ, बाढी, डुवान र पहिरो तीनवटा शब्द मात्र । तर यसको क्षतिको दायरा भने ठूलो छ । आँकलनको दायराले केही भ्याउँदैन । एकछिन अगाडी सकुशल व्यक्ति हेर्दा हेर्दै बाढी, डुवान र पहिरोका कारण सदाका लागि नबोल्ने बाटोमा अगाडी बढ्छ । यस्तो बाटो लाग्नेमा गएका पाँच दिनमा नै ६५ कटिसकेका छन् । वेपत्तााको संख्या पनि सरकारी तथ्याँक अनुसार ३० माथि छ । सरकारी डाटा एकिन नहुँदा केही अझै मर्ने र वेपत्ता हुनेको संख्या थपिन्छ । यो मानवीय क्षतिमात्र भयो । यसको अलावा भौतिक र जिवजन्तु, बालीनालीको क्षतिको कुरा अझै कति हो कति ? एकिन हुन सक्ने कुरै भएन । तथापि यो कुरा यतिमा नै टुँगिएको छैन ? खास कुरा त वल्ल सुरु भएको हो ।
हरेक बर्ष क्षण भरमा नै दशकौं मानिसको प्राण वायु उडाउने र अरबौंको क्षति चखाउने विपत्को पूर्व तयारी र मानीय सचेतना खोइ ? प्रश्न गम्भिर छ । यसमा दोषी केन्द्र सरकार होला, अलि परको पनि होला । नजकको सरकार त दोषी छ नै । अनि आम मानिसमा चाही यो दोष नदेख्नु पर्ने कारण पनि त छैन । जोड दिन खोजिएको कुरा सबै प्रकारका सरकार, यसो भन्दा उनीहरुका मातहतका हरेक निकायलाई छुट भन्ने होइन । यसको अलावा आम सर्वसाधारणले पनि सचेत हुने कि नहुने भन्ने सम्मको सन्दर्भ हो । हावाको झोकको त सामान्य मानिसले आँकलन गर्न अलि नसक्ला ? तर पानीको वहाव र उसको बाटोको आँकलन गर्न सामान्य मानिसले पनि सक्छ र सक्नु पनि पर्छ ।
पानी भन्नासाथ होचो जमिन खोजेर जाने बस्तु ( भूगोलको भाषामा ) भन्ने कुरा सर्वत्र ज्ञात भएकै कुरा हो । यो जानी जानी मानिस पनि आफू भन्दा निम्छरो मानिसलाई हेपेर गए जस्तो प्रकृतिको नियमलाई नै उल्टाइदिन्छु भनी होचो जमिनमा गएर भौतिक संरचना बनाइदिने हेपेर जाने हेपाहा कति ? होचो जमिनमा भौतिक संरचना अथवा निवास निर्माण गर्नु हुन्न भन्ने थोरै पनि हेक्का नराख्ने ? दोस्रो सधैंको पानीको वहावलाई एकछिन थुनेर आडम्बर गर्ने ? तेस्रो नितान्त व्यक्ति हितका लागि जग्गा प्लटिङ्ग गरी कर्मचारी र जग्गाका कारोवारीको गढजोडमा राज्यलाई नै झुक्याउने ? चौथो पहाडमा सडक र संरचना निर्माण गर्दा भू–सतहको परिक्षण नै नगरी मनपरी सडक र भौतिक संरचना बनाइ दिने ? पाँचौ वन जंगल ध्वस्तै बनाइ दिने ? छैठौं चुरे दोहोन गरी तराईको शिरलाई क्षतविक्षत नै पारिदिने ? लगायत । अनि बढि क्षतिको जोखिम त पहिले मानिसले भोग्न पर्छ नै ।
हो, यसमा अब सचेत को को बन्ने ? भन्ने नै मूल कुरा हो । पहिलो स्वयम् हरेक व्यक्ति सचेत बन्नै पर्छ । प्रकृतिले मानिसलाई उसैको दोहोलो काड्न मात्र मानिस बनाएको होइन । सन्ततिहरुका लागि पनि यो धर्ति आकाश, वातावरण र वायू चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिएको हो । आफै संरक्षकत्वको भूमिकामा पनि छौ भन्न खोजेकै हो । दोस्रो हरेक प्रकारका सरकार भन्नेहरुले पनि नेतृत्वमा रहँदा के कुरामा संवेदनशिल हुने ? भन्ने सूचना दिएको हो । यो कुरालाई मनन् गरेर हरेकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे मात्र अनेक विपतिबाट कम क्षति हुन्छ । हेक्का सबैमा हुनै पर्छ ।
सोमवार, श्रावण ६, २०७६, ०७:०७:००
नेशनलको गम्भिर त्रुटी (सम्पादकीय)
काल नबनोस् सडक ! घरबाट गन्तव्यमा हिडेको मानिस गन्तव्यमा नपुगेसम्म ढुक्क हुने अवस्था यहाँ रहेन